Temu Pepa Kubatsira mu Zimbabwe
Mitengo Yedu Raira izvozvi
Unoda rubatsiro rwehunyanzvi kunyora? Tora bepa remhando yepamusoro kubva pane rakanakisa rePepa Batsiro mu Zimbabwe yakanyorerwa kumatanho ese edzidzo.
Raira izvozvi Mitengo Yedu
Mutero wekudzoka kwevatengi
Kana iwe uchida kutora 100% mapepa epakutanga emitengo isingadhuri, zvino vimba nesu. Inguva yekusimudzira kubudirira kwako mune zvedzidzo neyekutanga nguva yekunyora bepa sevhisi mu Zimbabwe
Term Pepa Kubatsira Kwekutsvagisa Supervisors
Vazhinji vepamusoro-soro vanyori vezvidzidzo vanogara vachitarisa kunze kwetemu mapepa anobatsira zvakachipa. Iyo inonyanya kukosha mukana wekutenga term mushumo kubva kune yepamhepo sevhisi ndeyekuti iwe unoziva rako bepa richanyorwa neane ruzivo ruzivo. Pepa rako rave ikozvino rakasarudzika rakakura mushumo mushumo kunyora basa munyika kwauri, kubiridzira-kusununguka uye kunyoreswa neyakaenzana muyero zvese pamutengo wakaderera kwazvo, term report yekutenga kunyora bepa rako nemari shoma.
Pane zvimwe zvakawanda zvakanakira temu mapepa anobatsira kutenga zvakachipa. Izvi zvinosanganisira kutsvaga mhando chaiyo yepepa pepa kana dissertation yezvaunoda. Kune akawanda marudzi akasiyana emapepa etemu anowanikwa, uye anogona kusiana zvakanyanya muhunhu. Chirevo chakanyorwa-chakanyorwa chinosimbisa kuti dzidzo yako inonakidza sezvinobvira uye rondedzero yako ichaita fungidziro kune waunotarisira maneja wekuyunivhesiti.
Iwe unogona kunge uchishamisika kuti ungavimbiswa sei kuti hauna kungotambisa nguva yako uine yakaderera mhando term mushumo asi zvakare kutambisa mari yako? Muchikamu chino tichaenda kukupa mamwe matipi ekukubatsira iwe kusarudza kuti ndeupi rudzi rwezwi mushumo waunofanira kutenga.
Mitemo yetemu yakanyorwa zvese zvizere kana muchikamu chenguva. Yakazara temu chirevo zvinoreva kuti pane zvakawanda kupfuura peji rimwe chete reruzivo rwuri mupepa rako; kazhinji, kazhinji panowanzove nedzidziso, pfupiso, sumo, bhuku rebhaibheri, mhedziso, kubvuma uye mareferenzi. Chikamu-chenguva bepa chakaita senge chizere-chirevo mushumo asi kazhinji pane asingasviki zana remazwi mukati maro. Izvi zvinoita kuti zvive zvishoma kudzidzisa uye kunakidza pane yakazara-temu mushumo.
Vatariri vako vekutsvaga vanokutarisira kuti ushandise aya marudzi epepa nekuda kwechimiro chechinyorwa chauri kutsvaga. Nekuti iri fomu yakasarudzika yekunyora, iwe ungangoda kufunga kushandisa imwe yezwi reti mishumo inobatsira kutenga kuitira kuti iwe ugone kuvapa neruzivo rwakawanda runogoneka. Kana iwe ukasarudza isiriyo mhando yetemu yetemu yekutenga, unogona kuona kuti ivo havape ruzivo iwe rwaunoda.
Zviri nyore kwazvo kushandisa iyi mhando yebasa. Iyo sevhisi inogona kuwanikwa kuburikidza neinternet uye iwe unogona ipapo kuisa zvaunoda pane webhusaiti uye ipapo iwe unogona kupihwa nemhando dzakasiyana dzakasiyana dzemanyorero ekunyora masevhisi ekutsvaga kwako. Iwe unogona kuve nemushumo wakanyorwa kune yako PhD uyezve mushumo wekushandisa kune ako Masters zvichingodaro. Muchokwadi, kana iwe uine chero chaicho chinodiwa senge kunyora yako dissertation, iwe ungangodaro unokwanisa kuwana akawanda akasiyana marudzi eetemu mishumo yekutenga.
Imwe bhenefiti yeiyi sevhisi ndeyekuti kana iwe uchida rubatsiro mukugadzirisa rako basa usati warinyora, unogona kufona ndokumbira rubatsiro. Kana vasingakwanise kukubatsira nenzira iyi, unogona kutaura navo pane rimwe zuva. Vachagara vachifara kupindura mibvunzo yako nezve masevhisi avo. Kana usina chokwadi nezvekuti tsvagiridzo yakaitwa sei, saka vanofara kukupa mhinduro uye nekukuzivisa iwe matanho aunofanira kutora kugadzirisa chero zvikanganiso.
Izvi zvinokubatsira kuti unzwisise maitiro aungaita nezve rako rako rezvidzidzo bepa uye uve nechokwadi chekuti rakanyorwa nemazvo. Kune akawanda marudzi akasiyana erutsigiro aunogona kuwana kwauri kana iwe uchida rubatsiro rwezvidzidzo kuti utenge mhando chaiyo yemapepa etemu kuti unyore rako wega bepa redzidzo; kana iwe usingakwanise kunyora rako rako bepa, ivo vanokuraira iwe kuti ushandise sevhisi kune rako bepa redzidzo iro rinokutungamira uye nekukubatsira iwe munzira yacho.
Term bepa kunyora
Nyora pepa rangu temu
Nyora yangu temu bepa
Mapepa etemu ari kutengeswa
Term bepa rubatsiro
Bhadhara pepa repepa
Tsika temu bepa
Koreji term bepa
Tenga izwi repepa
Dzidzo temu bepa
© Copyright 2020 TermTogether-zimbabwe.online. All right reserved.
Sarudza imwe nyika
Kuita kuti saiti iyi ive nyore kwauri TermTogether-zimbabwe.online inoshandisa makuki. Verenga yedu mutemo wecookie.